Ikhabhinethi enemithi yokurhoxa echibini lamanzi amatsha
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguNita
Ukuba ukhangela indawo ezolileyo kwindawo enemithi, yiyo le. Ikhabhinethi inombono wechibi labucala eliziihektare ezi-7.5, umgangatho kunye nendlela yokuhamba ukuya kwindawo ebukekayo iDragon Run, enephenyane lokuhamba. Wamkelekile ukuba uze nephenyane lakho/ikayak. Ababukeli beentaka, abathanda iintyatyambo zasendle bayakonwabela le nto iDragon Run inokubonelela. Ukuba ukuthenga okanye imbali inomdla wakho, le ndlwana ikumgama wama-45 kuphela ukusuka eWilliamsburg, kwaye iya kukunika indawo yokuphumla. Le yindlu ehlala izilwanyana.
Le ndlu ineembono ezimangalisayo zemithi kunye nedama labucala. Xa uhleli kwiveranda yayo iMelody yeentaka ikuthatha ikuse kwimowudi yokuphumla eyahlukileyo kwaye uyazi ukuba usikelelekile ukuba ukwazi apha ingoma yazo emangalisayo. Kufuphi needolophu ezincinci ezibonelela ngobugcisa obukhethekileyo kunye neWilliamsburg enemimangaliso emininzi yembali, kuhlala kukho into yokondla umdla wakho wobukrelekrele. Kodwa ukuba ifuna nje ukushiyeka yodwa kwaye ukhuphe itekhnoloji ke leyo iyafumaneka. Ngoko ke kukuwe ukuba ukhethe kwaye nokuba yeyiphi na indlela ndicinga ukuba uya kuyonwabela le nto sinokunikela ngayo apha.
4.92 · Izimvo eziyi-342
Umbuki zindwendwe ngu- Nita
Eyona ndlela ingcono yokufikelela kum kungombhalo.